Valve Ball, Fittings Threaded, Mini Ball Valve - Kaixuan
Mifantoka amin'ny fittings sy valves fantsom-by izahay mandritra ny 18 taona mahery.
Izahay dia ekipa an'ny fianakaviana, Andriamatoa Yan mirahalahy dia nanangana KX Co. (Anping county KaiXuan stainless steel vokatra Co., Ltd.) ary nanangana ny orinasa Casting & CNC tamin'ny taona 2002. Andriamatoa Yan mirahalahy 'loholona tanora KX Co.' s fampandrosoana, paikady ary varotra manerantany.
Ny mpiasa tsirairay dia manandrana ny heriny mba hanaovana ny fittings sy valves fantsona tsara indrindra hanompoana sy hanomezana valiny ho an'ny mpanjifa, isika rehetra dia maniry ny hitohy tsy tapaka ity asa ity, izahay no mpamatsy sy valves azo antoka ary ekipa anao azo antoka.
Fanaterana vokatra avo lenta premium amin'ny vidin'ny fifaninanana. Saingy, tsy izany no antony iray isafidianan'ny mpanjifa KX Co. Ny fivarotana vokatra iray dia zavatra iray; hafa ny fanaterana haingana sy marina. Ao amin'ny KX Co., ny fandefasana haingana sy azo antoka ary ny kalitaon'ny serivisy dia voahaja fatratra.
Raisintsika ny ho avy: serivisy tsara indrindra & fandefasana haingana, toy ny nandrasan'ny mpanjifanay taminay: "Ambony ny vidiny sy ny kalitaony!"
Ny vokatra tsara dia miteny ho azy fa ny hevitra foana no manome lanja.
mans mpiasa matihanina fanapahana sy fikosoham-bary io, fitaovana fanandramana fanerena matihanina manana fanaraha-maso tsara amin'ny tsindry rano sy ny fanaraha-maso ny tsindry rivotra mandritra ny fizahana ny vokatra.
Ekipa Teknika efa za-draharaha
Fanohanana matanjaka amin'ny famokarana
Ny fahafaha-mamokatra isam-bolana dia 100 taonina. Ny lasitra mandeha ho azy tena novolavolain'ny tena dia manana famokarana 3 000 waxes isan'andro, izay avo telo heny noho ny mould manual.
Nampiasaina ho fantsom-pifandraisana amin'ny fitaterana rano, solika, lasantsy, ary ny karazan-koroka rehetra mety amin'ny vy vy.
Fampiharana: Rano, solika, simika, indostria hazavana, fitaovana avo lenta, fanafody fanafody sns.
KX dia manolotra ny mpanjifa eran'izao tontolo izao miaraka amina fametrahana fampiasam-bola marina araka izay takian'izy ireo.